VOODOO WHITE SILK WHITENING ESSENCE MASK 1 Piece
VOODOO WHITE SILK WHITENING ESSENCE MASK 10 pieces
မူလဈေးနှုန်း Ks 25,800
VOODOO PREMIUM BOOSTER WHITE SYN-AKE MASK 30.5g
ဈေးနှုန်း Ks 21,500
1. ဝက်ခြံနှင့်အဆီပြန်ခြင်းကို တိုက်ဖျက်ပေးခြင်း။ 2. အမည်းစက်၊ အရေးအကြောင်းဖြစ်ပေါ်စေမှုကို တိုက်ဖျက်ပေးခြင်း။ 3. အသားအရေကို အားပြန်ဖြည့်ပေးခြင်း နှင့် အသားအရေကို ဝင်းလက်စိုပြေလာစေခြင်း။
VOODOO AMEZON BOOSTER WHITE (SYN-AKE) 30.5g
မျက်ကွင်းကျခြင်း၊ ညိုခြင်းများ ဖျောက်ဖျက်နိုင်ခြင်း။ မူလ အသားရေ ပြန်လည်ရရှိနိုင်ခြင်း သာမက ဝက်ခြံဖြစ်ခြင်းမှ ကာကွယ်ပေးနိုင်ခြင်း။ Concentrated mask cream which combines the best extracts of Premium Original level. Experience the ultimate secret of the science of beauty as an innovative "SYN-AKE" or “snake venom serum” that imitate the function of snake venom which is the newest innovation anti-aging extract.
VOODOO AMEZON CC CREAM PERFECT SUNSCREENS 100ML
VOODOO AROMATIC ROSE WATER FACIAL SPRAY 100ML
မျက်နှာကို ဖြန်းပေးခြင်းအားဖြင့် နေပူဒဏ်မှ ကာကွယ်ပေးခြင်းနှင့် မျက်နှာပေါ်ထိရောက်လာမဲ့ အဆိပ်အတောက်များကို ဖယ်ရှားပေးပါတယ်။ Black Rose water an ancient natural facial moisturizer. Rose's tonic, reduce overheat and astringent effect on the capillaries helps to reduce thread vein. Rejuvenates and regenerates the skin. Geranium balances the production of sebum and is good for both excessively dry or congested, oily skin. Frankincense is good for aging skin and wrinkles, and for preservingayouthful complex. A combination of all ingredients of VOODOO AROMATIC ROSE WATER will ever give you an excellent facial spray for anytime as your need.
VOODOO PHYTO WHEATGRASS ORGANIC CHLOROPHYLL 6000mg
၁) အခြားသောအပင်တွေထက် ၇၀% ပိုပြီးများပြားသော ကလိုရိုဖီးဓာတ်ကို ရရှိပါမည်။ ၂) လူ၊ တိရစ္ဆာန်တို့တွင် အသားဓာတ်ဖြစ်စေသော အမီနိုအက်စစ်နှင့် အခြားသော ဗီတာမင်ဓာတ်များပြားခြင်း။ ၃) ခန္ဓာကိုယ်ထဲသို့ စုပ်ယူမှု အားကောင်းခြင်း။ ၄) သွေးအားလည်ပတ်မှုကောင်းခြင်း။ ၅) အသားအရေ ကြည်လင်ဝင်းပခြင်း။ ၆) ကင်ဆာဖြစ်နှုန်းကို လျော့ကျပေးခြင်း။ ၇) ခန္ဓာကိုယ်လှုပ်ရှားမှု ကောင်းမွန်ခြင်း။
VOODOO COLLAGEN 10,000 mg.
ဈေးနှုန်း Ks 59,000
COLLAGEN ဓာတ်ရှိသောကြောင့် အသားအရေကြည်လင်ဝင်းပခြင်း၊ အရေးအကြောင်းဖြစ်ခြင်းများ လျော့ကျခြင်း နှင့် နုပျိုလန်းဆန်းစေပါသည်။
VOODOO DEEP CLEANSING MAKEUP REMOVERS 100ML
မိတ်ကပ်များတစ်ကြိမ်ထဲကုန်စင်အောင်ပြုလုပ်ပေးနိုင်ခြင်း။ မျက်နှာပေါ်ရှိ အဆီ အဆိပ်အတောက်များ လျော့ကျနိုင်ခြင်း။ ဝက်ခြံ ဖြစ်ခြင်းမှ ကာကွယ်ပေးနိုင်ခြင်း၊ လျော့ကျနိုင်ခြင်း။ Amezon Deep Cleansing Makeup Remover isagentle cleanser lather quickly, washes off dead skin cells charged with melanin and cleanses the pores refine deep cleansing and easily. Cleanser Removing Long-wearing makeup and sunscreens quickly, gently, and efficiently.
VOODOO PREMIUM MILK CLEANSING MAKEUP REMOVERS 100ML
မျက်နှာပေါ်ရှိ အညစ်အကြေးများကို ကုန်စင်အောင် ပြုလုပ်ပေးနိုင်ပြီး အသားအရေများ ကြည်လင်တောက်ပစေပါတယ်။ Facial cleaning foam for sensitive skin and with sensitivity to sunlight, helps to removes dirt and makeup residue on your face deeply, and nourishes facial skin to whitening, brightening and looking healthy and radiant by special intensive extracts of pure milk protein, and also restores skin condition, inhibits wrinkles on your face.
စာမျက်နှာ 1 ဒေတာအချက်အလက်များ13